သဝန်တိုစိတ် ဘယ်ကလာ – BurmeseHearts
သံသယဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကို ပူလောင်စေပါတယ်။
သမီးရည်းစားချစ်သူဘဝမှာ အများအားဖြင့် ကြုံကြရတာကတော့ သဝန်တိုတတ်တဲ့ချစ်သူတွေကိုပါ။ သဝန်တိုတတ်တဲ့ အသိုင်းအဝန်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါမှာ သဝန်မတိုတတ်ရင်ပဲ မချစ်တော့သလို တဘက်လူက ထင်တတ်ကြသေးတယ်။ ဒီလိုထင်သူများလာတာနဲ့အမျှ သဘောထားပြည့်ဝကြောင်း ပြနိုင်တဲ့သူက ရှားလာပါတော့တယ်။ တကယ်သဝန်မတိုတဲ့တိုင်အောင် အနည်းဆုံးကတော့ ချစ်သူအလိုကျ သဝန်တိုပြကြရတာကိုး။
တကယ့်ကို သဝန်တိုတတ်တဲ့သူတွေကို ချစ်သူတော်မိ ၊ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမိတဲ့သူတွေဟာ ကံဆိုးသူတွေပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူတို့သဝန်တိုစိတ်ကြီးရင် ကြီးသလောက် မိမိရဲ့ ချစ်သူ ၊ လက်တွဲဖော်ကို ချုပ်ခြယ်လာ ၊ ချုပ်ကိုင်လာ ၊ ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ ၊ သံသယတွေ များလာလို့ပါပဲ။ ဒီတော့ တဖက်သူမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့် ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိတော့ဘူးပေါ့။ အများသွားတဲ့နေရာကို ချစ်သူ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ဘက် သဘောမတူဘဲ သွားခွင့်မရှိ ၊ အများလုပ်တဲ့အလုပ်ကို သူသဘောမတူဘဲ လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး မဟုတ်လား။
လုပ်မိရင် နှစ်ယောက်ကွိုင်ပူမယ် ၊ စကားများမယ် ၊ ရန်ဖြစ်မယ် ၊ ပြတ်စဲကောင်း ပြတ်စဲနိုင်တယ်လေ။ ချစ်သူတွေအဖြစ်နဲ့ကတော့ သည်းခံနိုင်တာပေါ့ ။ အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတော့ တဖက်က ရေရှည် သည်းခံနိုင်ပါတော့မလား။
သဝန်တိုစိတ် ဘယ်ကလာလဲလို့ ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင် မယုံကြည်စိတ်က မြစ်ဖျားခံလာနိုင်သလို ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲစိတ်ကနေလည်း မြစ်ဖျားခံလာနိုင်ပါတယ်။
မယုံကြည်စိတ်ဆိုတာ သူကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တာပါလို့ မယုံကြည်နိုင်တဲ့စိတ် ၊ တနည်းအားဖြင့် တဖက်သားရဲ့ အချစ်ကို မယုံကြည်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့။ ဒီစိတ်က ဖောက်ပြန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရာဇဝင်ရှိတဲ့ သမီးရည်းစား (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရထားသူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ့်အရည်အချင်းကို မယုံကြည်နိုင်တဲ့သူတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်ပြန်တတ်သူရထားတော့ ထပ်ဖောက်ပြန်မလား သံသယကြောင့် သဝန်တိုစိတ်ဖြစ်လာသလို ကိုယ့်အရည်မချင်းအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိသူတွေကျတော့ ဘာကြောင့် သဝန်တိုသလဲဆိုတာကိုတောင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မပြုနိုင်တော့ဘဲ ချစ်လို့ပါလို့ အာလွှဲ ၊ လျှာလွှဲ ပြောတတ်ကြတယ်။
ကိုယ့်အရည်အချင်းကို မယုံကြည်နိုင်တဲ့သူတွေဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ (သို့ဟုတ်) အိမ်ထောင်ဖက်ထက် ရုပ်ပြမလှသူ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိသူ ၊ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းချက်ရှိသူ ၊ ရောဂါရှိသူတွေအပြင် အရည်အချင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း တဖက်လူလောက် မထက်မြက်သူ ၊ မပြည့်စုံသူ ၊ စိတ်အားငယ်မှုအခံရှိနေသူတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘာဖြစ်လို့ ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုသလဲဆိုတာကို မသိချင်တော့ဘဲ ချစ်လို့ဆိုပြီး အလွယ်ပြောလို့ သူတို့အားနည်းချက်ကို ဖုံးကွယ်လိုသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲလို့ သဝန်တိုသူတွေကျတော့ အတ္တလွန်ကဲသူတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ငါထင်တာအမှန် ၊ ငါလုပ်တာအမှန်လို့ တယူသန်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲသူတွေကို လက်တွဲဖော်အဖြစ် စဉ်းစားမိရင်တော့ ခြေလှမ်းမကျွံခင် နောက်ဆုတ်လိုက်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သူ့အတ္တနဲ့ သူ့တယူသန်စိတ်ထားကြောင့် ကိုယ်သာလျှင် တသက်တာလုံး ဝမ်းနည်းကြေကွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တဖက်သားရဲ့ ခံစားချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုနိုင်သူတွေ ၊ ထည့်မစဉ်းစားလိုသူတွေလည်း ဖြစ်တယ်လေ။
မယုံကြည်စိတ်နဲ့ သဝန်တိုတတ်တဲ့ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတွေကို အကောင်းဆုံး ကုစားနိုင်ဖို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှုရှိလာအောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တာပါလို့ ယုံကြည်လာနိုင်အောင် ၊ ကိုယ်တိုင်က အရည်အချင်းပြည့်ဝသူမို့ သူကိုယ့်ကို ပစ်ပယ်မသွားဘူး ၊ ကိုယ့်ထက်သာသူကို ရှာမတွဲဘူးဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရင်း ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုလည်း ကိုယ်မြှင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဝန်တိုနေရုံနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ သူ့ကို အထိုက်အလျောက် ယုံကြည်မှုထားလိုက်ပါ။ ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့သူဟာ ဖောက်ပြန်မှာပဲမို့ သူဖောက်ပြန်သွားလည်း ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ကိုယ် သူ့ထက်သာတဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေး တည်ဆောက်ပြနိုင်တယ်မဟုတ်လား။
ယုံကြည်စိတ်လွန်ကဲသူတွေကတော့ သူ့အတ္တကို သူမလျှော့ချသရွေ့ ၊ သူ့ရဲ့တယူသန်မှုကို ကိုယ်တိုင် မပြောင်းလဲသရွေ့ သူ့စိတ်ပြောင်းလဲဖို့ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။
ချစ်တဲ့သူတိုင်း သဝန်မတိုတတ်သလို သဝန်တိုမှ တကယ်ချစ်တတ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ထားပြည့်ဝတဲ့သူတွေက တဖက်သားကို နားလည်မှုပေးတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ တဖက်သားကို မလွတ်မလပ်ဖြစ်အောင် အချစ်လို့ အချိုသပ်ပြီး ချုပ်နှောင်ထားလေ့ မရှိပါဘူး။ ချစ်ခြင်းနဲ့ သဝန်တိုခြင်း ခွဲခြားနိုင်ပါစေလေ။
တစ်လမှ နှစ်လအရွယ်အတွင်း ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ သင်ယူရတာလဲ?
မိဘနှင့် သားသမီးကြားက အကွာအဝေး
နို့တိုက်မိခင်ဟာ အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားရမယ့်အပြင် ဘာလိုအပ်သလဲ?
သန္ဓေသားရယ်လို့ စတင်ဖြစ်တည်ချိန်ဟာ ဘယ်ရက်သတ္တပတ်ထဲမှာလဲ?
အမျိုးသားများ မိန်းမပိုင်းလုံးကို သတိထားစေချင်
ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
ဆေးလိပ် ၊ အရက်နှင့် မူးယစ်စေတဲ့အစားအသောက်တွေကို…
အမျိုးသမီးများ လင်စိတ်သားစိတ် ကုန်ရခြင်းအကြောင်း
ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေ လက်ကို မကြာခဏစင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောသင့်သလဲ?
ကလေးတွေခံစားရတဲ့ စိတ်အားငယ်မှု အပိုင်း(၂)
မွေးကင်းစကလေးသန့်စင် ၊ ရေချိုး ၊ ခေါင်းလျှော်နည်း
အချစ်ကို ကစားတတ်သူများ၏ နိဂုံး
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ်(၈)ပတ်နဲ့ (၁၁)ပတ်အတွင်းက ကလေးရဲ့…
ကလေးတစ်လအရွယ်အတွင်း အပြင်ထွက်လျှင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
နေ့မစေ့ ၊ လမစေ့ မွေးတဲ့ကလေးငယ်တွေလို့ ဘယ်လိုအချက်နဲ့ သတ်မှတ်တတ်သလဲ?
မိမိသုံးစွဲ သောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများ ဆက်သုံးသင့်သလား?